IHuawei Yonwabele i-9S, i-P Smart + enamandla ngakumbi ye-2019 ngoku evuthiweyo | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-Huawei Yonwabele i-9S, iP enamandla ngakumbi + i-2019 ngoku evuzayo
Xa IHuawei P Smart + 2019 yaqaliswa, eyayineeveki ezininzi ezidlulileyo, siqaphele ukufana phakathi kwayo kunye neNwabisa 9S, itheminali eya kuthi ifike kwiintsuku ezimbalwa ezizayo.
Yonwabela i-9S eya kuvulwa ngoMatshi 25, kodwa ii-specs zayo kunye nokwenza kwayo sele kuvuza. Baqinisekisa ukuba esi sisixhobo esifanayo ne-P Smart + 2019, nangona inamandla e-RAM.
Kuqala kutyhilwa ngu myspice, iHuawei Yonwabela i-9S iya kuba nayo I-6.21-intshi ye-diagonal FullHD + umboniso ngenotshi Umbethe. Izindlu ngaphakathi kwenotshi yikhamera yesisombululo ye-8MP yeselfie kunye nokuvula ubuso. Ngasemva kukho ukuseta kwekhamera kathathu, enekhamera ephambili ye-24 MP, i-16 MP ye-angle-angle sensor, kunye ne-2 MP sensor sensor.
Kukho iprosesa Kirin 710 -isibhozo ezisibhozo phantsi kwe-hood ye-Enjoy 9S kwaye, ngokungafaniyo ne-P Smart + 2019, ene-3 GB ye-RAM, ine-4 GB ye-RAM. Iya kufumaneka kwi-64GB kunye ne-128GB yoguqulelo lwangaphakathi kwaye inokwandiswa ngokusebenzisa ikhadi le-microSD slot.
Ifowuni inesithwebuli somnwe esingasemva esingasemva kunye nebhetri yomthamo we-3,400 mAh. Kuya kufuneka uphinde usebenze nge-EMUI 9 ngokusekwe kuyo I-Android 9 Pie Ngaphandle kweBhokisi. Unikezelo lubonisa ukuba iza ngombala obomvu, oluhlaza okwesibhakabhaka, i-aurora kunye nomnyama. Ngokunokwenzeka ifemu ilungiselela eminye imibala kwesi selula, apho igradient iya kubakho njengenxalenye yoyilo lwayo olunomtsalane.
IHuawei iza kubhengeza i-9S Yonwabele ecaleni kwe-9e kunye ne-MediaPad M5 yoLutsha yoHlelo enikwa amandla ngu-Kirin 710 ngo-Matshi 25. Ke ngoko, yimicimbi nje yeentsuku ukuba simazi ngokupheleleyokunye nezinye izixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Huawei Yonwabele i-9S, iP enamandla ngakumbi + i-2019 ngoku evuzayo
Umhlaba kangangoko unako kwiMars, iVenus kunye nezinye iiplanethi kwiLander Pilot
UGoogle Gcina uya kuba nemowudi emnyama kuhlaziyo oluzayo